धेरै दिनपछि नेप्सेमा हरियाली, लगानीकर्तालाई राहत ! - Laltin Media
Home»सेयर बजार»धेरै दिनपछि नेप्सेमा हरियाली, लगानीकर्तालाई राहत !
धेरै दिनपछि नेप्सेमा हरियाली, लगानीकर्तालाई राहत !
आज बुधबार ४०.६८ अंकले बढेर १.६१ % वृद्धिको साथ नेप्से २५६८.२५ अंकमा बन्द भएको छ। कारोबार भएका २३२ कम्पनीमध्ये १७८ कम्पनी उकालो लागेका छन्, १३ कम्पनी ओरालो लागेका छन् र ४ कम्पनी स्थिर रहेका छन्।
बजार पूँजीकरण बढेर रु ३६ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ ।
NEPSE Daily Update: March 30, 2022
आज बोलिन्जर ब्याण्डको अपर र लोवर ब्याण्डको अन्तर घटेको विश्लेषणले देखाउँछ (आजको फरकः १९७) जसले बजारमा भोलाटाइलिटी घटेको इङ्गित गर्दछ। बजार आज लोवर ब्याण्ड (२४९९) भन्दा माथि २५६८ सम्ममा आएर बन्द भएको छ। आज बजारमा अन्तिम समयमा खरिद बढेको देखिन्छ ।
मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स विश्लेषणले एमएसिडि लाइन जिरो लाइन भन्दा -३६ मा आएको देखिन्छ। हिस्टोग्राम नेगेटिभ -२ मा आएको छ। एमएसिडी लाइनले माथि बाट तल तिर सिग्नल लाइनलाइ क्रस गरेर तल गएको देखिएको छ। सिग्नल लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -३४ आएको छ। समग्र मुभिङ्ग एभरेजलाई हेर्दा बजारमा आज खरिद बढी भएको देखिन्छ।
डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डिकेटरले भने आज +१४ डिएमआई लाइन तलतिर फर्किएको छ भने -१४ डिएमआई भने आज तल फर्किएको छ। सिग्नल लाइन + १४ डिएमआई लाइन लाइ क्रस गरेर माथि तिर फर्किएको छ । -१४ डिएमआई लाईन माथि बाट तल फर्किएको देखिन्छ जसले बिक्री घटेको बुझ्न सकिन्छ।
आज नेप्सेले बुलिस क्यान्डल बनाएको छ जसले बजारमा खरिद बढ्दै गएको जनाउँछ ।
क्युमुलेटिभ एडी लाइन -३५१० देखि बढेर -३३४५ मा आएको छ। नेप्सेको कुल भोल्युम ३८३२७११४ रहेको छ जुन २१ दिन मुभिङ एभरेज भोल्युम(५०३९९८१) को ७१ प्रतिशत देखिएको छ।
नेप्से आज लोवर ब्याण्ड २४९९ भन्दा माथि मिडल ब्याण्ड भन्दा तल २५६८ मा क्लोज भएको छ। एमएसिडी लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -३६ मा आएको छ र सिग्नल लाईन पनि जिरो लाइन तल -३४ मा देखिएको छ भने हिस्टोग्राम नेगेटिभ २ मा पुगेको छ जसले बजारमा बिक्री घटेको देखिन्छ।
-१४ डिएमआई लाइन तल फर्किएको छ भने +१४ डिएमआई लाईन पनि तल लागेको छ र एडिएक्स लाइन + १४ डीएमआइ लाइनलाइ क्रस गरेर माथितिर निरन्तर लागिरहेको देखिएको छ जसले ट्रेन्ड निरन्तर हुनसक्ने जस्तो देखिएको छ। आज बजारमा बिक्रीकर्ताको मोमेन्टम कम भएको सङ्केत गर्छ। आरएसआइ आज ३४ बाट बढेर ४१ मा पुगेको छ आरएसआइको मोमेन्टम बढेको जनाउँछ।
#nepse laltin tech analysis of nepse